Sivana Shinoa: Mahatonga Ny Media Sosialy Tsy Hampiseho Afa-tsy Vaovao Tsara Momba Ny Tondrandrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2016 12:31 GMT
Nandray anjara fototra tamin'ny tohin'ny zava-doza nikapoka an'i Shina ny media sosialy. Taorian'ny horohorontany tao Sichuan ny taona 2008, nampiasaina handrindràna ny asan'ny famonjena voina ny Weibo ilay toy ny Twitter-ny Shina. Ary taorian'ny fipoahana tao Tianjian tamijn'ny taona lasa, satria tsy dia naneho loatra ny zava-nitranga ny media teo an-toerana na samy tsy niraharaha daholo ny zava-nitranga, nandefa sy nanaparitaka ireo sary voalohany teo an-tànana ary nanome vaovao hatrany ireo mpampiasa vohikala.
Izany no mitranga amin'izao, amin'ireo vaovao mifandray amin'ilay tondradrano midadasika be, mahakasika faritany 26. Hatreto, eo amin'ny olona miisa 1,5 tapitrisa no nafindra toerana ary miisa 180 ireo maty. Eritreretin'ny Antoko Kaominista Shinoa fa tokony ho tsara ireo vaovaon'ny loza ary mifanaraka amin'ny foto-pisainany, avy amin'izany no miteraka ny tsy fahampian'ny loharanom-baovao mitsikera sy tena mandona araka ny tokony ho izy.
Maro ireo mpisera amin'ny Aterineto no nitaraina tamin'ny famafàna ireo vaovaon'ny tondradrano tao amin'ny Weibo. Nanoratra izao ny mpampiasa Weibo iray, avy tamin'ny faritanin'i Anhui:
Vaovao voabahana avy any ivelan'i Shina no namoaka fa namono olona am-polony vitsivitsy ny tondradrano any Anhui. Olona an-jatony nharan'ny tondradrano no nanao fihetsiketsehana ny 8 Jolay, nanohitra ny tafatafan'ny Fahitalavitra “Chinese Central Television” (CCTV) an'ny fanjakana niaraka tamin'ireo tomponandraikitry ny famonjena voina, izay nilaza fa takaitra tamin'ireo làlana lehibe roa monja no navelan'ilay tondradrano.
Mazava ho azy, tsy afaka hita ao amin'ny Webio ireo vaovao mikasika ilay hetsi-panoherana. Ireo vaovao mikasika ny fihetsika mahery fo sy fanaovana sorana ny tenany tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny famonjena ny loza nataon'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka no miparitaka be. Nofintininìilay mpanao gazetin'ny CCTV ny tatitra an-dahatsary momba ilay raharaha tao amin'ny lahatsoratra Weibo, sady nampiany pikantsary. Iny avy eo no naverin'ireo mpamoaka vaovao lehibe sy “mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny sivilizasiôna” — mpikambana amin'ny Ligin'ny Tanora Kaominista ao Shina izay manindrahindra ny hafatry ny antoko ety anaty Aterineto:
Olona fototra aorian'ny fanorenana ilay Three Gorges Dam, tohodrano goavana miteraka resabe ao amin'ny Renirano Yangtze ny Praiminisitra teo aloha Li Peng. Natao hahavita hiatrika ireo tondradrano indray mandeha ao anatin'ny arivo taona ilay tetikasa. Kanefa, ny tena marina, nanova ny toetrandro tany Yangtze ilay tetikasa, nahatonga haintany goavana tamin'ny fahavaratry ny taona 2006 ary ny lohataonan'ny taona 2010. Ary rehefa avoaka avy ao amin'ireo tohodrano ny rano, mijaly amin'ny trondradrano be ireo faritany any ambany any.
Sady izay indray, nanentsina ny fitsihan'ny rano mandritra ireo tondradrano, ny fakàna ireo farihy any afovoan-tanàna sy ireo faritra mando hanaovana tetikasa fampandrosoana ny tanàna avo lenta. Fa eo ambanin'ilay rafitra fanivanana ankehitriny, nolazaina ho manely tsaho ny tsikera mampifandray ilay tetikasa fampandrosoana sy ireo tondradrano, ary ny hany “marina lehibe” momba ny tondradrano dia ireo Miaramilam-bahoaka mahefy fo, eo ambany fitantanan'ny antoko.